IGreat Alaskan Husky: Okudinga Ukwazi - Izinhlobo
IGreat Alaskan Husky: Okudinga Ukwazi
Wake wayibona inja ebukeka njengeHusky yaseSiberia enombala ohlukile wejazi? Lowo mhlawumbe kwakungu-Husky wase-Alaska.
Ama-Alaskan Huskies aziwa ngobuhlakani bawo ku ukudonsa izihlibhi . Ngaphezu kwalokho, lawa ma-canine akhona uqotho futhi unothando , ngakho-ke bazokwenza ukwengeza okuphelele emindenini eminingi.
Ufuna ukwazi kangcono i-Alaskan Husky? Funda futhi uthole okuningi.
Imvelaphi ka-Alaskan Husky
Ngabe i-Alaskan Husky ibukeka kanjani?
Inja enothando enemvelo ebuyile
Ungayiqeqesha kanjani i-Alaskan Husky
Ngabe i-Alaskan Husky idinga ukuzivocavoca okungakanani?
Yiziphi izingqinamba zempilo angaba nazo lo Husky?
Yini okufanele idliwe yi-Alaskan Husky?
Ukulungisa i-Alaskan Husky yakho
Kuzobiza malini ukuba ne-Alaskan Husky?
Ngabe i-Alaskan Husky iyinja ekufanele?
I-Alaskan Husky uhlobo lukaHusky hhayi uhlobo lwayo oluhlukile.
Le canine yakhuliswa ngokuyinhloko ukuze ibe yi- inja esebenzayo , ikakhulukazi ukusetshenziswa sledding.
Le nja enamandla yathuthukiswa ngu ama-musher noma izinja zomjaho eziboshwe ngezihlibhi ezivela kumdabu ohlukile Inuit inja izinhlobo.
Ezinye zalezi zinhlobo zifaka phakathi USuskyan Husky , I-Alaskan Malamute , Inja yase-Eskimo, Isikhombi Esinezifinyezo ZaseJalimane, Umngcele Collie , Umalusi waseJalimane , U-Inuit Husky, kanye ne- I-Greyhound.
Amagazi asetshenziswayo ancike enhlosweni ethile yomfuyi. Ngakho-ke uma umfuyi efuna inja yesihlibhi yomjaho, angafuya ndawonye i-purebred Isikhombi kanye noSusky waseSiberia.
Ngo-2015 , kwatholakala ukuthi - ngaphandle kwabo umehluko - i-Alaskan Husky, i-Alaskan Malamute, ne-Siberian Husky bonke babenakho izimpawu ezifanayo zofuzo futhi babeyizihlobo eziseduze ze- Izinja zezihlibhi zeChukotka laseSiberia.
U-Alaskan Husky washeshe wathandwa ohlwini lwezinja zomjaho ngenxa yomnandi wakhe isivinini. Iningi lamaHuskies abonakala emijahweni yezinja yezihlibhi namuhla ngama-Alask Huskies.
Ama-Alaska Huskies anjalo okukhudlwana kunamaHusky eSiberia, kepha banokwakheka okuncanyana. Ngokungafani nozakwabo baseSiberia, lawa ma-canine ase-Alaska ngokuvamile anamehlo ansundu.
Lezi zinqamulelayo zinemilenze emide, isifuba esijulile, esibanzi, nomsila ogobekile, onamahlathi ngemuva. Eziningi zazo zivame ukuba njalo impisi ngokubukeka.
La maHuskies angaba namajazi ngemibala ehlukahlukene, kufaka phakathi ompunga, omhlophe, omnyama nomhlophe, o-blonde, owolintshi, onsundu, obomvu, noma ukhilimu.
Amajazi abo mfushane kuya kokulingene ngobude futhi kungabi kude. Amajazi abo amafushane asiza kufayela le- ukushabalalisa ukushisa lapho bencintisana emijahweni.
Banamabhantshi asindayo nejazi eliphezulu ngokwengeziwe ukubanikeza ukuvikelwa ezintweni ngenkathi bedonsa isihlibhi.
Ingabe lo Husky uthola kangakanani?
Indoda endala u-Alaskan Husky inesisindo esijwayelekile phakathi Amakhilogremu angama-40 kuye kwangama-60 (21 kuye kuma-25 kg), kanti insikazi endala isisinda ngokuzungezile Amakhilogremu angama-35 kuye kwangama-55 (17 kuya ku-19 kg). Bobabili ubulili banesilinganiso ukuphakama kwamasentimitha angama-23 kuya kwangu-26 ekuvuthweni.
Thola umbono ongcono wokuthi le nja ingafinyelela kangakanani kule vidiyo:
Ama-Alaskan Huskies ane- Isimo esizolile kunabazala babo baseSiberia no-Alaskan Malamute. Banobuntu obuhle futhi banobungane kubantu abajwayelene nabo.
Befuna ukwazi ngabantu abangabazi, la maHusky maningi amathuba okuthi ahogele abantu angajwayele bona kunokuba abakhonkothe.
I-Alaskan Husky ingaba yinja yomndeni enhle. Uyabathanda abantu nezinye izinja futhi waziwa njengo- umqashi onentshiseko . Uyayithanda inkampani yomndeni wakhe wabantu futhi waziwa ngokweqa abantu ngenxa yothando, hhayi ukubusa.
Lokhu kuqhekeka kunemvelo emnene, okusho ukuthi angathenjwa nxazonke zezingane.
Inja le kuyaqabukela kuba nolaka , kepha kusengcono kakhulu ukwengamela ukuxhumana phakathi kwezingane ezincane nesilwane sakho. Lokhu kuqinisekisa ukuthi azikho izehlakalo ezimbi ezenzakalayo futhi akekho olimalayo.
Ingabe ama-Alaska Huskies akhonkotha?
Ama-Alaskan Huskies athembekile ekudonselweni izihlibhi futhi ahle kakhulu kunkundla yomjaho, kepha akuzona izinogada ezinkulu. Lezi nzalo zikhona engathandi ukukhonkotha ; bangavele babheke abantu abangabazi kunokukhonkotha ukukuxwayisa ngezinsongo ezingaba khona.
Kodwa-ke, njengabazala babo baseSiberia, lezi zinja thanda ukuhewula . Bangakhala ngezizathu eziningi:
Ufuna ukunaka wena.
Izinja zingakhononda njengesibonakaliso sokukhathazeka ngokwehlukana.
I-Husky yakho ingahle iphendule ezintweni ezibanga imvelo yayo, njengefenisha entsha ekhaya noma i-ambulensi edlula ngaphandle.
Izinja zikhala ngokuzwakalisa ubuhlungu noma ukungakhululeki.
Ama-Alaska Huskies ahlakaniphile futhi isabela ekuqeqeshweni .
Abanye babo bangaba nenkani enenkani, noma kunjalo, ngenxa yenkululeko yabo yemvelo.
Kufanele uzimise njengo pack umholi futhi uqine lapho uqeqesha i-Alaskan Husky; uma kungenjalo, bangaba nenkani futhi benze okubi.
Ukuze uthole imiphumela emihle, lawa ma-canines kufanele abe uqeqeshiwe ekuqaleni kobuntwana. Kusencane Amaviki ayisishiyagalombili ubudala , i-Alaskan Husky ilungele ukufunda imiyalo eyisisekelo.
Izikhathi zokuqeqesha kufanele zigcinwe mfushane ukumgcina enelukuluku futhi enentshisekelo yokufunda izinto ezintsha.
Ukuqiniswa okuhle isebenza kangcono kule Husky. Njengezinja eziningi, baphendula kangcono ukuncoma nokuphatha ngokuqhathaniswa nokujeziswa.
Izwi lesixwayiso, noma kunjalo - ukuqeqesha le nja kuzobandakanya ukusebenza kanzima, ukubekezela, kanye nokuvumelana.
I-Alaskan Husky nayo kufanele ithole okuningi umphakathi , ikakhulukazi ngenkathi isencane. Zinike isikhathi sokumazisa kwezinye izilwane zasekhaya.
Lapho esegonyiwe, mthathe uyomfaka epaki yezinja ukuze adlale nezinye izinja futhi ajabulele isikhathi sokudlala esiphumile.
Ukwenza uHusky wakho akulalele
Ngaphambi kokuqala noma yikuphi ukuqeqeshwa ne-Alaskan Husky yakho, qiniseka ukuthi usuzinzile njenge- i-alpha noma umholi wepakethe. Kufanele kucacele ku-Alaskan Husky wakho lokho nguwe ophethe nokuthi igunya lakho akumele liphonselwe inselelo.
Nakhu okumbalwa okufanele ukwenze nokungafanele ukwenze njengokulandela i-alpha:
Kufanele uhlale uyi okokuqala ukungena nokuphuma ngomnyango.
Umholi kufanele ngaso sonke isikhathi yidla kuqala . Yondla inja yakho kuphela uma usuqedile ukudla kwakho.
Yenza i-Alaskan Husky yakho isuke endleleni esikhundleni sokujikeleza kuye.
Ungayinaki inja yakho noma nini lapho ifuna khona. Setha imithetho futhi umnikeze ukunaka kwakho okuhlukanisiwe kuphela lapho ubona kufanelekile.
U-Alaskan Husky wakho kufanele aqokelwe yena indawo yokulala . Ungalokothi uvumele inja yakho ilale embhedeni nawe.
Ngokuvumelana nangokuqina, u-Alaskan Husky wakho ekugcineni uzofunda ukukwenza lalela wena njengoba umholi wamaphakethe nokumqeqesha kuzoba lula kakhulu.
I-Alaskan Husky yaklanyelwa ukudonsa ngesihlibhi, futhi, ngenxa yalesi sizathu, banamandla amnandi wokuqina.
Lawa ma-canine ayadlala futhi asebenza ngokweqile, ngakho-ke adinga okuningi ukuvivinya umzimba ngamandla nsuku zonke. Futhi badinga okuningi ukugqugquzela ingqondo ngenxa yobuhlakani babo.
Izidingo zika-Alaskan Husky okungenani ihora lokuzivocavoca nsuku zonke. Inqubo yokuzivocavoca yenja yakho yansuku zonke kufanele ifake phakathi ukuhamba kwemizuzu engu-20 kuye kwengu-40 noma ihora lokugijima. Uma uthanda ukuhamba ngebhayisikili, myeke agijime eceleni kwebhayisikili lakho ohambweni lwakho lomakhelwane.
Ungamenza uHusky wakho abambe iqhaza kwezemidlalo ezifana sledding nokushushuluza , njengoba lokhu kuzoqhubeka kumsize ashise wonke amandla anawo futhi amgcine ehlala ephilile futhi ephilile.
Le canine izokwenza kahle emidlalweni efana ne- lobubhalo , ukulalela, ukuhlangana kanye nokwelusa. Le misebenzi izomnika ithuba lokuzivocavoca umzimba wakhe nobuchopho bakhe.
UHusky wakho uzothokozela isikhathi sokudlala esingemuva kakhulu, kepha qiniseka ukuthi igceke lakho lilungiselelwe inja yakho. Lawa ma-canine adume kakhulu ngokuba phunyuka abaculi . Bangama-jumpers abaphumelele nabemba.
Gcina inja yakho iqukethe impahla yakho ngokwakha uthango olubushelelezi lokhuni okungenani olungamamitha ayisithupha ubude yakhiwe ezungeze igceke lakho. Izinkuni ezibushelelezi ziyindlela engcono kakhulu yocingo, njengoba uHusky engeke akwazi ukukhuphuka okubhaliwe.
Qiniseka ukuthi inja yakho ayizisebenzisi ngokweqile, noma kunjalo, ikakhulukazi ngezinsuku ezifudumele, ezinelanga. Kungadala ukushisa ngokweqile ku-Husky yakho ye-Alaskan futhi ngokuhamba kwesikhathi kungaholela ezinkingeni ezinkulu zezempilo.
Uma ungaphumi uhamba noHusky wakho, ungamgcina ematasa ngemidlalo ethile yobuchopho efana umdlalo wokuzifihla nokufuna nokuzingelwa kwengcebo. Amathoyizi endida nokuhlafuna amathoyizi nawo azosiza ukugcwalisa isidingo sale nja yokuvuselelwa kwengqondo.
Ama-Alaskan Huskies athambekele ezinkingeni ezahlukahlukene zezempilo, ikakhulukazi lezo ezijwayelekile ezinhlotsheni zabazali bazo.
Abazalisi abahloniphekile bazohlola imidlwane yabo ngempilo futhi bakwazise nganoma yiziphi izinkinga zezempilo i-puppy yakho ethambekele kuzo ukuze ukwazi ukuzilungiselela ngokwanele lezi zimo.
Ezinye zezimo zezempilo ezingathinta ama-Alaska Huskies zifaka:
Ukukhubazeka okuzalwa kwe-larynx (kubangela imisindo evuthayo lapho uphefumula)
Ukuqhubekela phambili kwe-Retinal Atrophy
UHusky wakho naye angangenwa I-Alaskan Husky Encephalopathy , okuyisifo sobuchopho esingalapheki esiletha ebuntombini. Lesi simo sidala izingqinamba zemizwa ngenxa yokungakwazi kwenja ukucubungula kahle i-thiamine ekudleni kwayo.
Uhlala isikhathi esingakanani u-Husky wase-Alaskan?
I-Alaskan Husky inesilinganiso seminyaka yokuphila Iminyaka engu-10 kuya kwengu-15 . Ungasiza ukunweba impilo yenja yakho ngokuyiyisa kudokotela wezilwane ukuze ayohlolwa njalo, uyinike ukudla okufanele, futhi uqiniseke ukuthi ithola ukuzivocavoca umzimba okwanele.
Ungazisindisa futhi ezindlekweni nasenhlekeleleni yenja engenampilo, ehlala isikhathi esifushane ngokuthola injana yakho kumfuyi onedumela.
Ama-Alaskan Huskies ayizinja ezisheshayo, ezinamandla amakhulu, futhi ayazidinga ukudla okuseqophelweni eliphezulu abacebile ngamakhalori wokugcina amazinga abo wamandla.
Umuntu omdala wase-Alaskan Husky udinga okungenani ama-calories ayi-1100 nsuku zonke.
Ama-Senior Alaskan Huskies adinga ama-calories ayi-1000 ngenkathi ama-Huskies asebenzayo - njengalabo abadonsa izihlibhi noma ababamba iqhaza emijahweni njalo - badinga okungenani Ama-calories ayi-1800 nsuku zonke.
Hlela ukuhlinzeka i-Alaskan Husky yakho ngokudla okuqukethe okungenani Amaphesenti angu-22% namafutha angu-8% .
Okuqukethwe kwamaprotheni okuphezulu kuzogcina amalunga enja yakho enempilo futhi kukhuthaze ukukhula kwemisipha okunempilo, kanti okuqukethwe okunamafutha kuzosiza uHusky agcine amazinga ayo wamandla.
I-Alaskan Husky enempilo kufanele ibe nokudla okubandakanya izithelo, imifino, inyama nenhlanzi, ikakhulukazi uhlobo lwenhlanzi . Lezi zinja zizohamba kahle nezinhlanzi, okuyizinja eziningi ezidliwayo e-Alaska ezidlayo.
Gwema ukunikeza inja yakho isalmon eluhlaza , noma kunjalo, njengoba ingaqukatha amathambo amancane nezinambuzane.
Ungaphakela futhi ukudla kwakho kwezinja okusezingeni eliphakeme le-Husky. Mnike Izinkomishi ezi-3 ukuya kwezi-4 zokudla kwenja eyomile kwehlukaniswe kabili ukudla. Inja yakho kufanele futhi ibe namanzi amasha ngaso sonke isikhathi.
Ngaphandle kwamaprotheni enyama, imikhiqizo eminingi yokuhweba ye-kibble ingafaka futhi tshala amaprotheni njengodali nophizi, uHusky wakho azosizakala ngakho.
Zama ukungondli umdlwane wakho we-Alaskan Husky ukudla okulandelayo:
Ukudla okunothile ngokolweni, ubisi lwe-skim, i-whey, nobisi
Kufanele umondle kangaki uHusky wakho?
Umdlwane wakho we-Alaskan Husky kufanele wondliwe kathathu ngosuku . Lapho efinyelela ekuvuthweni okugcwele (ngemuva cishe konyaka), unganciphisa imvamisa kuye ukudla kabili ngosuku .
Izinja zika-Alaskan Husky hhayi abadli abakhulu . Imvamisa ngeke badle lapho bengalambile. Ukuzondla amahora amabili ngaphambi kokuzivocavoca kufanele kube ngokwanele ukuxhasa amandla nokuqina kwabo.
I-Alaskan Husky ine- ijazi lokuzihlanza ngakho-ke ngokuvamile kulula ukuzilungisa uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo.
Inja le uphalaza ngokulingene futhi idinga ukuxubha cishe kabili kuya kathathu ngesonto .
Ngesikhathi se- ukuchitha isizini Kodwa-ke, lindela ukuchitheka okukhulu nokuqhuma, lapho kuphuma izigaxa ezinkulu zoboya.
Udinga ukuxubha ingubo yenja yakho nsuku zonke ngalesi sikhathi. Yilungele ukusebenzisa i-vacuum cleaner kaningi, futhi.
Ukugeza i-Alaskan Husky kufanele igcinwe okungenani. Le nja ayinuki futhi izodlula okugeza kanye ngenyanga . Qiniseka ukuthi usebenzisa i-shampoo yenja evunyelwe i-vet lapho ugeza i-canine yakho.
Kwakhe amazinyo kudingeka ube ibhulashi nsuku zonke noma okungenani kabili ngesonto. Sebenzisa isixubho senja nomuthi wokuxubha bese uqala umkhuba ngenkathi u-Alaskan Husky wakho esengumdlwane ukuze ajwayele inqubo.
Ukunqunywa kwezipikili kungenziwa kanye ngenyanga . Ungazisika ngokwakho, kepha qaphela ukuthi ungazisiki ngokujule kakhulu ukugwema ukulimaza inja yakho.
Izindlebe zakho zikaHusky kufanele zihlolwe kanye ngesonto nganoma yiziphi izimpawu zokucasuka, ubomvu, ukutheleleka, nokwakhiwa kwe-wax. Hlanza umdlwane wakho izindlebe usebenzisa i-cleanser evunyelwe i-vet namabhola ambalwa kakotini.
Kunezindleko ezithile okufanele uzicabangele lapho unquma ukuba nomdlwane wase-Alaskan Husky njengesilwane esifuywayo. Okokuqala, kunentengo yomdlwane kaHusky uqobo.
Imidlwane ka-Alaskan Husky evela kulayini wokujaha ophezulu ingabiza noma kuphi kusuka $ 10,000 kuya ku- $ 15,000 ngamunye! Ngakolunye uhlangothi, umdlwane ophilile wase-Alaskan Husky ngaphandle kohlanga lomjaho ovela kumfuyi onedumela ubiza nxazonke $ 1,000 kuya ku- $ 1,500 .
Izindleko zokuqala kuzesekeli ezifana nekhreyithi, ikhola, i-leash, isithwali, okombhede, nezitsha kungabiza nxazonke $ 220 .
Ezinye izinqubo zokwelashwa njengokuphalaza noma ukungathathi hlangothi, ukudubula, ukuhlolwa kwegazi, ukuhlolwa komzimba, i-microchipping kanye nokubulala izikelemu kuzobiza cishe $ 290 , kuya ngokuthi uhlala kuphi. Izindleko zokwelashwa zaminyaka yonke njengamashothi, izikhuni kanye umkhaza ukuvimbela, ukuhlola, nomshuwalense wezilwane kuzoba khona $ 485 .
Izindleko zaminyaka yonke zokudla kwenja esezingeni eliphakeme futhi ukuphatha imidlwane kuzoba seduze $ 235 , ngenkathi ezinye izindleko ezihlukile ezinjengamathoyizi, ukuqeqeshwa okuyisisekelo nelayisense cishe $ 265 unyaka.
Ungamtholaphi uHusky wakho omusha
Unezinketho ezimbalwa uma ufuna ukugoduka ne-Alaskan Husky. Uma ufuna umdlwane we-Alaskan Husky othandekayo, ukubheja kwakho okuhle kunakho konke umfuyi .
Akubona bonke abalimi abadalwa belingana, noma kunjalo, ngakho-ke kuzodingeka wenze ucwaningo oluthile ukuthola umfuyi othembekile. Umfuyi ofanele angakunika imibhalo noma isitifiketi sokuthi imidlwane yakhe nabazali bakhe babeyikho kuhlolwe ezempilo .
Ufuna futhi ukukhetha umfuyi ongeke angabaze ukukuvumela ukuthi uze ukuvakasha. Imidlwane kufanele ngabe ihlala ku- imvelo ehlanzekile, evulekile futhi kufanele ngabe bachitha isikhathi nabangane babo kanye nabazali babo.
Nazi ezimbalwa abalimi abahloniphekile ukubheka ku:
AmaSleddogs eDeer Creek (Ukuza)
Amaphuzu Angaziwa (EMinnesota)
Awunaso isikhathi soku indlu eqeqesha umdlwane ? Futhi unenketho yokwamukela i-Alaskan Husky. Ukwamukela inja kuvame ukubiza kakhulu. Ngenhlanhla, ungahle ukwazi ukuthatha ekhaya i inja endala lokho sekuvele kuqeqeshwe endlini futhi iyayazi imiyalo eyisisekelo.
Uma ukutholwa kungokwakho, hlola lezi zinhlangano zokutakula nezindawo zokukhosela ezigxile kumaHuskies:
Ukutakulwa Kwezinja ZaseNyakatho California (ECalifornia)
Ukutakula kwe-Heartland Husky (Oklahoma)
Ukutakulwa kukaTahoe Husky (ENyakatho California / eNyakatho Nevada)
I-Alaskan Husky iyinja enobungane ene- imvelo ezolile .
Uthanda ukuchitha isikhathi nomndeni wakhe, futhi uzoba nesimo sokuhlehlisa izingane.
Lolu hlobo lokudlala, olunamandla amakhulu uthanda ezamehlela , ngakho-ke uzokwenza umlingani omuhle kakhulu wabantu abanezindlela zokuphila ezisebenzayo nabathanda ngaphandle.
Ufuna umngane we-canine ozohamba agijime nawe nsuku zonke? Lo Husky uzokulwela.
Kodwa-ke, kufanele ucabange ukuthi i-Alaskan Husky iyi- ukulinganisela kuya kokuchithwa okunzima , ngakho-ke kungenzeka angabi yinja efanele abantu abaphethwe yilesi sifo komzimba ukuzula.
Ubuye akhale kakhulu, ngakho-ke lungela ukuthola izikhalazo komakhelwane bakho ngomsindo.
Ingabe ungumnikazi we-Husky yase-Alaskan? Yabelana ngemicabango yakho ngalezi zidalwa ezinomusa esigabeni sokuphawula ngezansi!
Hlangana nePeekapoo: I-lapdog ngesibindi sebhubesi
I-Cockapoo: Konke Esikuthandayo Mayelana Ne-Cocker Spaniel Poodle Mix
Amagama eLabrador: Amagama angama-500 ahlukile, apholile futhi ahamba phambili wamaLabhu
Konke Okufanele Ukwazi Nge-Patterdale Terrier Dog
Amamiksi aphezulu angama-53 athandeka kakhulu e-Corgi
Umhlahlandlela Wokuxuba Ocacile Womalusi waseJalimane weGolden Retriever
Imibuzo eyi-9 Mayelana neRottweiler Iyaphendulwa
I-Golden Retriever Lab Mix: Uhlolojikelele lwe-Dog Breed and Guide
Pocket Pitbull: Konke Okufanele Ukwazi Ngezinja Zepokhethi
Konke Odinga Ukukwazi NgeGold Retriever
Umalusi omncane wase-Australia: Okufanele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga
shih tzu poodle mix temperament
I-blue pitbull mix nomalusi waseJalimane
umalusi waseJalimane hlanganisa nelabhu
ungayibona kanjani inhlobo yakho yezinja